Caqliga wanaagsani waa sidan. Ka nasta siyaasada iyo warxumo tashiilka | Dhageyso Idaacada maalinkasta oo sabti ah saacada magala Oslo: 20:00-23:00
Caqliga wanaagsani waa sidan. Ka nasta siyaasada iyo warxumo tashiilka
← Maadarisada Quraanka Kee Gorey july 2019
Socdaalkii Somaliland. Barnaamijyo ayaan idiin soo wadnaa ee ku sii suga,. Bulaxaar, Batalaale →